रोनाल्डोको गोल वर्षा जारी, विवादास्पद पेनाल्टीले हारबाट जोगियो युभेन्टस - News20 Media
रोनाल्डोको गोल वर्षा जारी, विवादास्पद पेनाल्टीले हारबाट जोगियो युभेन्टस
February 15, 2020 February 15, 2020 N20LeaveaComment on रोनाल्डोको गोल वर्षा जारी, विवादास्पद पेनाल्टीले हारबाट जोगियो युभेन्टस
काठमाडौं : क्रिस्टियानो रोनाल्डोले खेलको इन्जुरी समयमा पेनाल्टीमार्फत गोल गरेपछि युभेन्ट्स कोपा इटालिया कप फुटबलमा हारबाट जोगिएको छ । बिहीबार राति भएको सेमिफाइनल खेलको पहिलो लेगमा युभेन्ट्सले १० खेलाडीमा समेटिएको एसी मिलानसँग १–१ गोलको बराबरी खेलेको हो ।
मिलानको घरेलु मैदानमा खेलिएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । मिलानले ६१ औँ मिनेटमा सुरुवाती गोल गरेको थियो । मिलानका लागि एन्टी रेविकले गोल गरे । उनले स्यामुइल क्यास्टिलेजोको पासमा गोल गरेका थिए । ७१औं मिनेटमा मिलान १० खेलाडीमा समेटिएको थियो । युभेन्ट्सका पाउलो डिबालालाई फल हानेपछि थियो हर्नान्डेजले दोहोरो पहेँलो (रातो) कार्ड पाएका थिए ।
त्यसपछि खेलमा दबदबा जमाएको युभेन्ट्सले ९० औँ मिनेटमा बराबरी गोल फर्कायो । रोनाल्डोको हेड प्रहारलाई मिलानका डेभिड कालाब्रियाले डिबक्स भित्र ह्यान्ड गरेपछि युभेन्ट्सले पेनाल्टीको अपिल गरेको थियो ।
रेफ्रीले भिएआरको सहायतामा युभेन्ट्सलाई पेनाल्टी दिए । जसलाई रोनाल्डोले सदुपयोग गर्दै टोलीको हार टारे । रोनाल्डोले सन् २०२० मा खेलिएका सबै आठ खेलमा गोल गरेका छन् । यसअघि रोनाल्डोले लिगमा भेरोनाविरुद्ध कीर्तिमानी लगातार १० खेलमा गोल गरेका सेमिफाइनल खेलको दोस्रो लेग आगामी मार्च ५ तारिख युभेन्ट्सको मैदानमा हुनेछ ।
थाहा नदिइ भारतीय कबड्डी टिम पाकिस्तान पुगेपछि हंगामा
सिंगापुरको प्रशिक्षक बने नेपाली टिमलाई प्रशिक्षण दिइसकेका डेभ वाटमोर
न्युजिल्याण्डबिरुद्धको पहिलो वनडे अगाडि नै भारताई लाग्यो यति ठुलो झड्का
February 4, 2020 February 4, 2020 N20
आर्मीका भरत उत्कृष्ट फरवार्ड !! यी हुन् ‘ए’ डिभिजन लिगमा उत्कृष्ट खेलाडी, कसले कति रकम पाए ?
February 16, 2020 February 16, 2020 N20
फिफा वरीयतामा नेपाल १७०औं स्थानमा यथावत
February 20, 2020 February 20, 2020 N20